University of Bremen - Get Higher Education an-tany hafa any Eoropa
Créé : 1440
Aza adino ny ifanakalozy hevitra University of Bremen
Misoratra anarana ao amin'ny University of Bremen
The University of Bremen dia iray amin'ireo 11 classed andrim-panjakana toy ny “Elite oniversite” any Alemaina, ary ny oniversite ny eo ho eo 23,500 ny olona avy amin'ny 126 firenena izay mianatra, fampianarana, fikarohana, ary miasa any Bremen. Efa lasa ny siansa afovoan'i West North Alemaina.
Ny anjerimanontolo dia manana laza miavaka indrindra amin'ny siansa ara-politika, indostrialy injeniera, Hafanàm-po an haino aman-jery, Fizìka, Matematika,ny zavamiaina bitika, geosciences (indrindra an-dranomasina geosciences), ary Eoropeanina ny lalàna.
Ny fanoloran-tena izay mitondra ny lohateny Namaly soa "City ny Science 2005" (City of Science ny 2005), izay siansa, politika, raharaham-barotra sy ny kolontsaina nahazo miaraka ho Bremen sy Bremerhaven, ny Foundation for alemà Science (Mpanome 'Association for alemà Science).
Ny sasany tamin'ireo lalana izay nalaina tamin'izany, koa dia antsoina hoe ny “Bremen modely”, manana satria lasa toetra ny oniversite ankehitriny, toy ny interdisciplinary, explorative fianarana, dehibe ny fampiharana ara-tsosialy-miompana tetikasa fianarana izay manana laza avo ao amin'ny tontolo akademika ary koa eo amin'ny raharaham-barotra sy ny orinasa. Fanovana fomba hafa ny teo aloha 'oniversite vaovao' Efa voaporofo ho fahadisoana toy ny waiving lenta ny tapaky ny sampam-pianarana, tripartite solontena na koa "mpianatra-namana" mandini fitsipika sy nomena tao Bremen taona vitsivitsy lasa izay.
Manodidina 23,000 ny olona amin'izao fotoana izao toy ny mpianatra mavitrika, mpampianatra, mpikaroka, na ny mpiasa ao amin'ny Oniversiten'i Bremen. Dia nanjary iray amin'ireo Germany`s iraika ambin'ny folo ambony anjerimanontolo ny tsara. Izany dia ny siansa ivon'ny Avaratra Alemaina, malaza noho ny hery ao amin'ny siansa sy ny injeniera fitsipika, ary koa ny humanities sy ny siansa sosialy.
Ny asa ataon'ny ny mpikaroka, maro izay ny iraisam-pirenena repute, manome zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana stimuli ny hevi-baovao sy ny fanapahan-kevitra ny olana miatrika fiaraha-monina amin'ny ankapobeny. Nitsidika vahiny avy amin'ny manerana izao tontolo izao hanatsara ny fiainana toeram-pianarana ao amin'ny Oniversiten'i Bremen, izay fanta-daza ao amin'ny fiaraha-monina ny mpianatra ho toy ny toerana ho an'ny fianarana cosmopolitan sy ny fikarohana. Hatrany hanokatra ny hevi-baovao sy ny handrandraiko fomba manamboatra sy manatsara, fitantanana ny anjerimanontolo sy akademika mpiasa no fifandrindrana amin'ireo ny vahoaka sy ny fiaraha-monina miara-miasa amin'ny vondrona nandritra ny efa-polo taona.
Ny toetra miavaka ny fikarohana any Bremen dia vokatry, ankoatry ny zavatra hafa, ny oniversite akaiky ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina maro fikarohana Institiota, na ny toeram-pianarana sy ny manodidina ny faritra. Ny fahaizana sy ny aina mamelona no nahasarika mihoatra ny efa-jato sy ny raharaham-barotra fikarohana
Ventures dia ny teknolojia zaridaina manodidina ny toeram-pianarana, famoronana nasionaly ekena foiben'ny ny teknolojia avo.
Fizika / elektrika Engineering
Biolojia / Simia
Matematika / Computer Science
Production Engineering – Taozava-baventy mekanika & Process Engineering
Business Studies sy ny Toekarena
Fiteny sy ny haisoratra Fianarana
Olombelona sy ny fahasalamana Siansa
Fanabeazan'Andriamanitra sy ny Siansa Fanabeazana
Nanorina amin'ny fotoana fanavaozana ara-tsosialy
Ny Oniversiten'i Bremen dia Young University. Efa naorina tao 1971 fa ny tanjon'ny fanofanana mpampianatra. Inona no ho tonga fantatra amin'ny hoe "Modely Bremen" mbola torontoronina tao fotoanan'ny fanavaozana ara-tsosialy. Ny singa fototry mihatra mandraka androany dia nisy ireo fitsipika fototra izay voalohany nanao ny fikarohana manaraka fahombiazana azo atao: Interdisciplinary fironana, fikarohana mifototra amin'ny fianarana amin'ny tetikasa fampianarana, fironana ho amin'ny fomba fanao ara-tsosialy sy ny fanoloran-tena. Misy fitsipika fitarihana vaovao no nanampy hatramin'ny: Internationalization ny fampianarana sy ny fikarohana, lahy sy ny vavy mitovy fahafahana, andraikitra sy ny tontolo iainana.
Fanamafisana ao amin'ny taona 80 - mandeha eny an-dalana ho amin'ny fahombiazana
Taorian'ny nanorenana ny University - ho toy ny "akademika sarotra" amin'ny manodidina ny tanàna - sy ny maro ny fanavaozana am-piandohana, ny fanamafisana ny fe-potoana napetraka tao amin'ny sivy ambin'ny folo eighties. Ny University of Bremen nitombo ny habeny. New fahaizanareo for voajanahary siansa sy ny injeniera dia naorina, ny University nanomboka ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Alfred Wegener Institute for POLAR sy Ocean Research in Bremerhaven, ary ny Technology Park noforonina (1988).
Ny University of Bremen nanomboka ihany koa ny baolina voalohany fahombiazana amin'ny fametrahana ny fiaraha-miasa foibem-pikarohana (in 1988 ny University dia nanaiky tao an-alemà Research Society – DFG) ary ny fahazoana famatsiam-bola ivelany Mitana. Fanatsarana hatrany fikarohana filaharana, fitomboan'ny-pirenena sy iraisam-pirenena sy ny fankatoavana maro be professorships fanafiana masina dia ny hita maso ity vokatra fahombiazana.
Ny University nandroso fahombiazana izany koa ny fanorenana vaovao napetraka ny fitarihana fitsipika. Ankoatry ny zavatra hafa, ny University nifantoka ezaka eo amin'ny fampiroboroboana ny tanora sy ny fikarohana ampiharina talenta manokana ny fampandrosoana ny fandaharan'asa ho an'ny tanora mpikaroka, Maro mantsy no loka professorships tany taorian'ny fanovana ny taranaka izay nitranga.
Ankoatra ny rehetra izany, fampianarana sy ny fampianarana ao amin'ny Oniversiten'i Bremen nandalo fiovana be: Fieken-keloka politika vaovao, ohatra, amin'ny fandaharan'asa-fisoratana anarana fepetra takiana manokana, ary ny haingam-pandeha tetezamita ny fianarana fandaharana mba licence sy Mpampianatra diplaoma. Ny valisoa ho an'ny fanoloran-tena izany dia tonga ny lohateny hoe "City of Science 2005", nahazo ny Bremen sy Bremerhaven ho vokatry ny ezaka eo amin'ny mpiray ny ampahany amin'ny siansa, politika, kolontsaina, ary ny sehatry ny orinasa.
ankehitriny, sasany 25,000 fianarana ny olona, mampianatra, fikarohana sy ny asa ao amin'ny Oniversiten'i Bremen. Efa lasa ny foiben'ny ny siansa sy ny fikarohana ao amin'ny Avaratra Andrefan'i Alemaina, indrindra fa fanta-daza noho ny hery ao amin'ny voajanahary sy ny injeniera siansa ary koa ny siansa ara-tsosialy sy ny humanities. Ny asa ataon'ny mpikaroka ny tsara, maro izay nalaza eran-tany, dia manome zava-dehibe ny fiaraha-monina handrisika fampandrosoana.
Toy ny outstandingly tsara ny vokatry ny fampisehoana ao amin'ny Mampiseho, ny University dia tsy afa-po ny handro amin'ny fahombiazana taloha sy sasatra fotsiny eo amin'ny Ravintsara. Toy ny "fianarana fikambanana", izany foana hampifanarahana ny anjara asany dia mikasa ny hilalao amin'ny ankehitriny sy ny ho avy sy ny fikarohana akademika tontolo.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra University of Bremen ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
University of Bremen ao amin'ny Map
Photos: University of Bremen ofisialy Facebook
University of Bremen Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Bremen.
Ny University of Greifswald Greifswald
Free University of Berlin Berlin
Martin Luther Oniversiten'i Halle-Wittenberg Halle